Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase China eziQhekezayo » Irizothi ye-Universal Beijing ivulela uluntu namhlanje
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • inkcubeko • ukonwatyiswa • Imiboniso bhanya bhanya • Icandelo lokungenisa izihambi • Utyalo mali • iindaba • abantu • Resorts • Theme Parks • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Njengeprojekthi enkulu yotyalo-mali lwangaphandle kushishino lweenkonzo eBeijing, indawo ekuchithelwa kuyo iiholide kulindeleke ukuba inyuse ukusekwa kwe-Beijing njengeziko lokusetyenziswa kwamazwe aphesheya kunye nokomeleza ukuzithemba kwenkcubeko yase-China kunye nomzi mveliso wokhenketho phakathi kwesibetho se-COVID-19.
Ihotele i-Universal Beijing, ekungoku nje inkulu ehlabathini, ivulelwe uluntu ngoMvulo.
Indawo yokuphumla, egubungela i-4 km km, ibandakanya ipaki yomxholo we-Universal Studios Beijing, i-Universal CityWalk, neehotele ezimbini.
Kukho iindawo zokuzonwabisa ezingama-37 kunye nomtsalane obalaseleyo, kunye nemiboniso engama-24 yokuzonwabisa.
Indawo enkulu kunazo zonke kwihlabathi jikelele evulelwe uluntu ngoMvulo kwiSithili saseTongzhou eBeijing, apho kuhleli khona iZiko loLawulo likaMasipala waseBeijing.
Irizothi ye-Universal Beijing, okwangoku eyeyona inkulu kubungakanani kwihlabathi liphela, yindawo yesihlanu yepaki yomxholo we-Universal Studios kwihlabathi liphela, eyesithathu e-Asia, kwaye yeyokuqala e-China.
Indawo yokuphumla, egubungela i-4 km km, ibandakanya ipaki yomxholo we-Universal Studios Beijing, i-Universal CityWalk, neehotele ezimbini. Ithembisa ukunika abakhenkethi ithuba lokundwendwela, kunye namazwe asixhenxe anezinto zokuzonwabisa ezingama-37 kunye nomtsalane obalaseleyo, kunye nemiboniso yolonwabo engama-24.
Ukuvulwa kwe Irizothi ye-Universal Beijing kungqamene nomthendeleko walo nyaka we-Mid-Autumn Festival oqala nge-19 kaSeptemba ukuya nge-21 kaSeptemba.
Ukuthembela kwiiPropati zeIntellectual eyaziwa njengehlabathi ezinje ngeTransformers, Minions, Harry Potter kunye neJurassic World, i-Universal Beijing Resort itsale amashumi amawaka abakhenkethi ngexesha ukusebenza kwetyala ekuqaleni kukaSeptemba.
Kwimihlaba esixhenxe yokuhlaziya indawo, uKung Fu Panda Land of Awesomeness, Transformers Metrobase kunye neWaterWorld zilungiselelwe ngokukodwa abakhenkethi baseTshayina.
Ulwakhiwo luthathe nje iminyaka emibini enesiqingatha. Ukusetyenziswa kwetekhnoloji ephezulu yamaTshayina kulinciphise kakhulu ixesha lokwakha, utshilo uWang Tayi, umphathi jikelele weBeijing International Resort Co., Ltd.
Emva phaya ngo-1990, iBeijing yayihlola uphuhliso olwahlukeneyo lweshishini lokhenketho, ngelixa inkampani yase-US i-Universal Parks & Resorts yayikhangela namathuba okungena kwimakethi yase-China.
Ekuqaleni kuka-2001, urhulumente kamasipala waseBeijing kunye ne-US babamba iingxoxo malunga nolwakhiwo lweprojekthi ye-Universal Resort eBeijing. Ngo-Okthobha waloo nyaka, batyikitya incwadi enenjongo yokusebenzisana.
Emva kokuba iprojekthi ivunyiwe ngo-2014, iBeijing International Resort Co., Ltd., intsebenziswano phakathi kweChina ne-US ngobunini beholide, yasekwa ngoDisemba ka-2017.
Ngokuka-Yang Lei, usekela-ntloko weSithili sase-Tongzhou sase-Beijing, utyalo-mali kulwakhiwo lweholide lwangaphezulu kwe-35 yezigidigidi ze-yuan (malunga ne-5.4 yezigidigidi zeedola).
Kwincopho yokwakhiwa kweprojekthi ngoJulayi 2020, bekukho abasebenzi abangama-36,000 bebaleka ngokuchasene nexesha ukuqinisekisa ulwakhiwo olungenamagingxi-gingxi phakathi kwesibetho se-COVID-19.
Ulwakhiwo lwezakhiwo eziphambili ze-Universal Beijing Resort zagqitywa ngexesha ngo-2020. Indawo yokuphumla yaqala ukuvavanya uxinzelelo ngoJuni 2021 kwaye yaqala ukusebenza kwetyala Nge-1 kaSeptemba kwaye yavulwa ngokusesikweni eluntwini ngoSeptemba 20.